W/Warfaafinta oo sheegtay in Culimo uu ka Mid yahay Sheekh Bashiir Axmed Salaad Ay U adeegsan doonto dacaayadaha ka dhanka ah Al Shabaab.
Sunday June 29, 2014 - 12:23:20 in Wararka by Super Admin
Kadib kulan ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay isugu yimideen wasiirka warfaafinta Dowladda Federaalka iyo culimo taageersan shisheeyaha dalka kusoo duulay ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah.
Wasiirka warfaafinta DF-ka Mustafa Dhuxuloow oo shirka guddoominayay ayaa sheegay in wasaaradiisa iyo culimo ay hormuud u yihiin Sheekh Bashiir Axmed Salaad iyo Nuur Baaruud gurxan ay isla garteen dhanka wax uu ugu yeeray baraarujinta bulshada ay kala qeyb galaan.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in labada dhinac ay islasoo qaadeen fulinta mashaariic ay soo gudbiyeen hay’adaha Ammaanka (Ashahadda ladirirka) ee fadhigoodu yahay xerada Xalane oo looga gol-leeyahay in xamlo dacaayada ah lagu furo xarakada Al Shabaab waxaana xamladaasi kaalin weyn ku lahaan doona Wadaada xumayaasha la shaqeeya shisheeyaha.
Qaar katiran warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa sababa ammaan aawgeed udiiday qandaraaskan ka yimid hay’adaha shisheeye halka kuwa kalane ay qaateen.
Bashiir Axmed Salaad iyo Nuur Baaruud Gurxan oo maradu ka dhacday ayaa cilmigii iyo diinkii bulshadu ku baratay la hoosgalay AMISOM iyo hay’adaha shisheeye ugu dambeyntiina waxay isku bedeleen kaabayaasha Ashahaadda ladirirka iyagoo mar walba kasoo muuqda fadhiyada ay shisheeyaha soo duulay ugu tashanayaan shacabka soomaaliyeed.
C/Risaaq Bahlaawi oo katirsan wasaaradda warfaafinta DF-ka ayaa labadan Sheekh ku tilmaamay "Lafdhabarta wasaaradda warfaafinta ee dhanka dacaayadaha ka dhanka ah Mujaahidiinta”.
Iska hor'imaad Kismaayo ka dhacay iyo Wafdi American ah oo Axmed Madoobe kulan laqaatay.
Wasiirkii Amniga maamulka Axmed Madoobe oo ka baxsaday Xabsi Muqdisho kuyaal.
Saciid Deni iyo Axmed Madoobe oo kulamo ka wada magaalada Nairobi.